आहा ! ल हेर्नुहोस यस्तो पो रहेछ पशुपालन गर्ने स्मार्ट पद्दती – भिडियो सहित – PathivaraOnline
Home > प्रविधि > आहा ! ल हेर्नुहोस यस्तो पो रहेछ पशुपालन गर्ने स्मार्ट पद्दती – भिडियो सहित
आहा ! ल हेर्नुहोस यस्तो पो रहेछ पशुपालन गर्ने स्मार्ट पद्दती – भिडियो सहित
admin September 12, 2018 प्रविधि, विचार 0
पछिल्लो समयमा हरेक क्षेत्रमा नविन प्रविधीहरुको विकास भएको छ र यसको उचित प्रयोग हुनसके कुनैपनी क्षेत्रको विकास हुनमा लामो समय कुरी रहन पर्दैन । प्रविधिको विकासक्रमले कृषी प्रणालीमा पनि आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्छ । विकशित देसहरुमा प्रविधीकै प्रयोगले गर्दा छोटो समय अनी थोरै लगानीमा प्रसस्त उत्पादन गरेर निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणालीलाई ब्यबसाहीक रुपमा विकास गरिएको छ ।
अत नेपाल पानि यौटा कृषी प्रधान देस र यांहाका अधिकाम्स मानिसहरु कृषी तथा पशुपालन पेसामा आबद्द रहेका छन् । तर उचित प्रविधीको अभावमा अत्यन्तै न्युन उत्पादन एवं लागत पनि बढी भएको कारण आजका कृषकहरु कृषी तथा पशुपालन पेशाबाट बिमुख वा निरास भएको पईन्छ । आज हामी यस्तो भिडियो प्रस्तुत गर्दै छौ जसले पशुपालन प्रणालीमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यस्तो प्रबिधीले कम लागत एवं छोटो समयमा बढी उत्पादन दिनुको साथै ब्यबसाहिक पशुपालन लगानी गर्न प्रेरित समेत गर्ने छ । यो भिडियोले विकशित राष्ट्रमा हुने पशुपालन प्रणालीलाई देखाएको छ । जसले आम जन-मानसमा थोरै भएपनी उपयोगी जानकारी प्रधान गर्ने छ । पुरा भिडियो हेर्नुहोला……
फेसबुकले नै करोडाैं प्रयोगकर्ताको डाटा चोरेपछि विश्वभरबाट यस्तो…